Homeसमाचारविवाहको २ दिनपछि आफ्नो पुर्व-प्रेमिकालाई अचानक प्लेनको एकै सिटमा देखेपछि (भिडियोसहित)
January 1, 2021 admin समाचार 9330
भारतीय अभिनेत्री गोहर खानले आफु विवाह बन्धनमा बा’धिएको ठिक दुई दिन पछि आफ्नो पुर्व प्रेमी कुशल टन्डनलाई प्लेनमा भेटेकी छन । गौहर खानले जैद दरबारसँग विवाह गरेकी हुन् ।
सन् २०१३ मा भारतीय चर्चि’त रियालिटी शो बिग बस सिजन ७ मा सहभागी हुने क्रममा गोहार र कुशलको मित्रता संगै प्रेम भएको थियो । उनको शोकी बिजेता समेत बनेकी गोहार र कुशलको निक्कै लामै प्रेम सम्बन्ध जारी रह्यो । तर पछी अचानक कुश’लले नै गोहारसंग ब्रेकअप भएको सार्बजनिक गरेका थिए ।
उनै कुशलको भाग्य यस्तो भयो कि अचा’नक मुम्बई जाने प्लेनको एकै सिटमा आफ्नो विवाहित पुर्वप्रेमिकालाई भेटे । गोहारको हातमा लगाएको मेहेन्दी समेत जस्ता’को त्यस्तै देखिन्छ । आफ्नो पुर्व प्रेमिका’लाई विवाह लगत्तै विमानमा अ’चानक देखेपछि उनले एक भि’डियो बनाउदै गोहारलाई दाम्पत्य जीवनको शुभ’कामना समेत दिएका छन् ।
कुशल भिडि’योमा बोल्दै भन्छन्, म आफ्नो गृहनगर जाँदैछु, र मैले कसलाई भेटें, हेर्नुहोस् मेरी प्रिय मित्र गौहर’लाई। हामी अचानक भेटियौं । मैले गौह’रलाई फलो गरेको भने होइन है । यो सुनेर गौ’हर हाँस्न थालिन् ।
उनी धेरै राम्री देखिन्छिन्। म तिम्रो लागि धेरै खुसी छु। हुनसक्छ म तिमि’लाई बधाई दिन यसरी भेटे। विवा’हको शुभकामना गौहर। यति भन्दै अन्तमा कुशलले हाई मेरो भाग्य भनेर भिडि’योको अन्त्य गर्छन।
हुन पनि गोहार खान निक्कै नै सुन्दरी छन । आफ्नो पुर्वप्रे’मिकालाइ अरु कसैले जीव’नसंगिनी बनाएको आफ्नै आखाले देख्दा कुशललाई अहिले पश्चाताप भएको भि’डियो हेर्दा महसुस गर्न सकिन्छ । भिडि’यो हेर्नुहोस ।
यी सुन्दरीसँग रोमान्टिक अवस्थामा फेला परे प्रकाश सपुत(भिडियो हेर्नुहोस्)
January 16, 2021 admin समाचार 6910
अघोरी बाबा र उनको अमेरिकन श्रीमतीको वि’बाहको बारेमा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर के उनको बैबाहीक स’म्बन्धको बारेमा वास्त’विक कुरा सबैलाई थाहा छ त ? अघोरी बाबाले आफ्नो कुरा खुलेर राख्ने गर्दछन् ।
ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, आज तोलाको कतिमा कारोबार भइरहेको छ?
October 29, 2020 admin समाचार 10292
नेपाली बजारमा बिहि’बार सुनको मुल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यव’सायी महा’संघका अनुसार आज सुनको मुल्य तोला’मा एक हजार रुपैयाँ घटेर ९४ हजार ७०० रुपैयाँमा कारो’बार भएको महासंघले जना’एको छ । त्यस्तै आज ते’जावी सुन
बिहे भएको तीन महिना नबित्दै नर्स पत्निलाई ,सासु ससुरा र पति मिलेर दिए यस्तो या’तना (भिडियो हेर्नुहस्)
November 6, 2020 admin समाचार 9105
सिंगो परिबार मिलेर बुहारीलाई मर’णोसान्न हुने गरि कु’टपिट गरेपछि बुहारी रा’तारात भागेर आफनो ज्यान बचा’उन स’फल भएकी छिन । घट’ना हो ललितपुरको । ललितपुरकी यि पि’डित सनिशा तामाङ पेशाले नर्श हुन । बिहे भएको ३